Isaayaas Afawarqii: “Laft Eeritiraa kan hin deebi’iin hafee diddaa TPLF’tiin” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIsaayaas Afawarqii: “Laft Eeritiraa kan hin deebi’iin hafee diddaa TPLF’tiin”
Isaayaas Afawarqii: “Laft Eeritiraa kan hin deebi’iin hafee diddaa TPLF’tiin”
Pirezidaanti isaayaas Afawarqii
(bbcafaanoromoo)—Pirezidaantiin Eeritiraa Isaayaas Afawarqiin gaafiifi deebii TV biyyattii waliin kaleessa taasisan keessatti waa’ee walitti dhufeenya biyyi isaaniifi Itoophiyaafi biyyoota ollaa kan biroo waliin qabdu irratti bal’inaan haasa’aniiru.
Haasaa isaaniin kanaanis sababii waldhabdee Itoophiyaafi Eertiraa kan ta’ee waa’ee gaaffii dangaa keessattu gaaffii biyyattii Baadimarratti waliigalteen akka hin raawwatamneef gufuun TPLf dha jechuun komataniiru.
”Lafti qabeenyaa Eeritaa deebii’u kan dadhabeef diddaa TPLF’tiin,” jedhaniiru Pirezidaanti Isaayaas.
Waligalteen nageenyaa Eeritiraafi Itoophiyaa dhimma daangaa waggoota 20’n darbaniif tureef furmaata ni kenna jedhamee eegamuu ilaalchisuunis, ejjannoo TPLF daangicha ilaalchisuun fudhatan komataniiru.
”Yaadni ministirri Mummee Abiyi dubbatan osoo hojiirra hin ooliin dura haalli daangaa Baadime akkuma arginu kan duri caalaa sadarkaansaa haala cimaarratti argama.”
”Murteen seeraa kennameera. Haaluma murtee kanaanis lafti biyyattii gara keenyaatti daangeeffamu qabaata ture. Amma garuu kun hindanda’amne,” jedhaniiru.
”Maaliif hin deebiine kan jenne yoo ta’e, gamtaan kisaare (TPLF) gama tokkoon dhimma daangaa akka dhimma dorsisaatti, gama biraan ammoo akka mata duree tirgaatti waan qabateef, waggaa tokkoofi walakkaa keessatti dhimma Baadimee irratti maal hojjannee yoo jedhame, gabaabumatti osoo gadi fageenya keessa hin galiin gabaabumatti sadarkaa cimaa keessa galleera,” jedhaniiru.
“Ammayyu lafti sabab waraanaa turte Baadimmeen qoqqoodamtee hiramaa jirti,” kan jedhan pirezidaantichi kun ammoo rakkoo daangaa tureef furmaata waaraa akka hin kennineefi tahuu himan.
”Lafti Eertiraaf murtaa’e eenyuuf qoodamaa akka jiru odeeffannoo qabna.”
MM Abiy Ahmad dhimmi daangaa kanaa ilaalchisee waliigaltee Aljeersi akka fudhatan himanis TPLF ejjennoo isaanii ifatti hin ibsine.
Haa tahu malee MM Abiy erga waliigalticha fudhachuu ibsanii waggaa tokkoon booda illee furmaata itti kennuuf waan hojjetamaa jiru ifatti wan mul’atu hin jiru.
Ertiraaf lafti Baadimmeetii murtaa’e ammayyuu harka Itoophiyaati kan jiru.
Harka keenya marannee hin teenyu
Hariiroo Itoophiyaa waliin qaban ilaalchisee pirezidaanti Isaayaas yoo dubbatan, ”dhimma Baaddimmee irratti qofa daanga’uu dhiisnee karaa hundumaan iyyuu jijjiirama gama Itoophiyaan dhufe ni deeggarra,” jedhan.
”Karaa nagaa hojjettee kan fidduu malee akka ‘manna’ waan Samii irraa buustu miti” kan jedhan pirezidaantichi Itoophiyaa waliin deeggarsa karaa nagaa jalqabame cimsanii hojjechuun rakkinicha furuuf akka itti fufan himaniiru.
Amma Itoophiyaa waliin waliigalteen nageenyaa jalqabame hojii guddaa kan gaafatu tahuu himanii jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti raawwatu kamiyyuu akka biyya ollaatti qofa osoo hin taane kallattiin Eertiraas waan miidhuuf, ” harka keenya marannee hin teenyu,” jedhan.
Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni dhaloota sadii oliif gaggeeffame kan hiika hin qabne” akka ture himanii waraanichas humnootni alaa wal xaxaa akka taasisanii tures himan.
Yaasoo Kabbabaa haa hiikamu jechuun Eebba waajjira ABO Kamisee irratti ummati Keenya walloo gaafachaa oole! .